တောင်ပေါ်သား: သတိထားစရာ လူတုပ်ကွေး
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က ကမ္ဘာ့အဆိုးရွားဆုံး ကပ်ရောဂါအဆင့် ၆ အထိ သတ်မှတ်ခံထားရပြီ ဖြစ်တဲ့ ၀က်တုတ်ကွေးရောဂါခေါ် A/ H1N1 ရောဂါဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ချိန်းခြောက်နေတဲ့ ကပ်ရောဂါဖြစ်လာပြီ ဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံကိုပါ ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းရှိ ပြည်သူအချို့ကတော့ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ် ထားနေပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ အချို့ အထိအတွေ့ နည်းသူတွေကတော့ ဒီရောဂါကို သာမန်ရောဂါဆန်း တစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်နေသေးပြီး ကာကွယ်မှုတွေ နည်းနေသေးတာကို တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ လူတုတ်ကွေး/ ၀က်တုတ်ကွေး ရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး Mutdfan.com မှ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ရဲ့ အကူအညီ တောင်း မေတ္တာရပ်ခံမှုအရ Mutdfan.com မှာ ဘောလုံးသတင်း ရေးသားနေသူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ဆရာဝန်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ကျမ်းမာရေး ဆောင်းပါး ရေးသားပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလာခဲ့တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ပေါက်စလေး ကျွန်တော်ဟာ ရေးသားဖို့ တွန့်ဆုတ် နေခဲ့ပေမဲ့ "ပြည်သူများအတွက် အရေးကြီးသော ကပ်ရောဂါဆိုးတစ်ခုကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်စေရေး အတွက် တစ်ဖက်တလမ်းမှု ကူညီရာ ရောက်စေရန်" ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရှာဖွေ ပြုစု တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဝက်တုပ်ကွေးဟု လူသိများနေသော လူတုပ်ကွေးရောဂါအကြောင်းသိကောင်းစရာ အချက်အလက်များ
၁. ရောဂါ စတင်ဖြစ်ပွါးပုံသမိုင်း
swine flu (သို့မဟုတ်) H1N1 ဆိုပြီး ယခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ လူတုပ်ကွေးရောဂါ က type A influenza ဗိုင်းရပ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ ဝက်တွေမှာဖြစ်တဲ့ ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါဟာ ရှိနေခဲ့တာကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း ယခုဘက်နှစ်ပိုင်းတွေမှာ ဖြစ်ပွါးမှုမရှိခြင်းကြောင့် လူသိနည်းရခြင်းဖြစ်တယ်။ ပထမဆုံး ဝက်တုပ်ကွေးနှင့်ဆင်တူသော လူတုပ်ကွေး ကပ်ရောဂါကြီးမှာ ၁၉၁၈ တွင် စပိန်တုပ်ကွေးဟု နာမည်ကြီးခဲ့သော “Spanish flu" ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူသန်းပေါင်း ၅၀ ခန့်ကိုကူးစက်ခဲ့သော ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးပဲဖြစ်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ၁၉၇၆၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၈ တို့တွင်လည်း ဖြစ်ပွါးခဲ့ပါတယ်။ ယခုနှစ်နောက်ပိုင်း အနီးစပ်ဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ၂၀၀၇ခုနှစ် ဖိလစ်ပိုင်မှာ ဝက်တွေမှာဖြစ်ပွါးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော ပညာရှင်များ၏ သုံးသပ်ချက်အရ အာရှတိုက် နှင့် ဥရောပတိုက်မှ ငှက်များ၊ လူများတွင် ပါသော ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ် နှင့် မြောက်အမေရိကတိုက်ရှိ ဝက်များမှ ဗိုင်းရပ်ပိုးများ ပေါင်းစပ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ ဗိုင်းရပ်ပိုးသစ်တစ်မျိုး အဖြစ်ဆင့်ကဲဖြစ်လာရခြင်းဟု သိရှိရသော်လည်း ထို အဆိုကို မှန်မမှန် ကောက်ချက်ယူရန် ခဲယဉ်းပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ လူတုပ်ကွေးရောဂါသည် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကိုခြိမ်းခြောက်လာပြီဖြစ်သည်။
၂. ရောဂါဖြစ်ပွါးစေသော ဗိုင်းရပ်အကြောင်း
လူတုပ်ကွေးရောဂါကို ဖြစ်ပွါးစေသောဗိုင်းရပ်မှာ H1N1 ဗိုင်းရပ်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်တင်ပြပြီးဖြစ်သည်။ ယခု ထိုဗိုင်းရပ်အကြောင်း ကျွန်တော်သိရှိသမျှ ပြောပြချင်ပါသည်။ type A influenza ဗိုင်းရပ်တွင် မျိုးကွဲများ များစွာရှိပါသည်။ ထိုမျိုးကွဲများကို ဗိုင်းရပ်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်တွင်ရှိသော antigen ၂ခုဖြစ်သော H နှင့် N ပေါ်တွင် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ ယခု ဖြစ်ပွါးနေသော တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်မှာ H1N1 ဖြစ်သည်။ ထို H1N1 ဗိုင်းရပ် ၏ဗီဇမှာလည်း အမြဲပင်ပြောင်းလဲနေတတ်သောကြောင့် H1N1 မျိုးကွဲပေါင်များစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် နှစ်စဉ် မျိုးကွဲအသစ်များကိုကာကွယ်သော တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေးသစ်များ ထုတ်လုပ်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ ဝက်၏ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းတွင် လူ၊ ငှက် တုပ်ကွေးပိုးများကိုလက်ခံနိုင်သော receptors များရှိသောကြောင့် ဝက်သည် ဗိုင်းရပ်မျိုးပေါင်းစုံအားလက်ခံထားသော လက်ခံကောင် ကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် လူတုပ်ကွေးပိုး၊ ငှက်တုပ်ကွေးပိုး၊ ဝက်တုပ်ကွေးပိုး တို့၏ "genes" များပေါင်းစပ်သွားပြီး မျိုးစိတ်သစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆရပေသည်။
၃. ရောဂါ ကူးစက်ပုံ နှင့် ကူးစက်ရာလမ်းကြောင်း
၂၀၀၉ ခုနှစ် ကူးစက်မှုမတိုင်မီက ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွါးရာတွင် ဝက်မှလူသို့ကူးစက်ခြင်းသာရှိခဲ့ပြီး လူမှလူသို့ကူးစက်ခြင်းမှာ မရှိသလောက်ရှားခဲ့သည်။ ရောဂါကူးစက်ခြင်းခံရသောလူများမှာ ဝက်များနှင့်ထိတွေ့ခြင်းရှိသောလူများသာဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုဖြစ်ပွါးနေသော ကပ်ရောဂါတွင်မူ လူလူချင်းကူးစက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဝက်မှလူသို့ကူးစက်ခြင်းထက် လူမှလူသို့ကူးစက်နေခြင်းသာ များနေသောကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် တိရိစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေး အသင်းအဖွဲ့များ၏ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ မှ လူတုပ်ကွေးရောဂါဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ရောဂါ ကူးစက်ပုံနှင့် ပက်သက်၍ပြောရမည်ဆိုလျှင် အဓိကကူးစက်သော လမ်းကြောင်းမှာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှ ကူးစက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရောဂါရှိနေသောသူတစ်ယောက် ချောင်းဆိုး၊ နှာချေလိုက်သောအခါ ရောဂါပိုးများသည် အမှုန်အမွှားများအဖြစ်နှင့် လေထုထဲတွင် ပြန့်နှံ့သွားသည်။ ထိုအမှုန်အမွှားများကို ရှူလိုက်မိသူသည်ရောဂါကူးစက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ရောဂါပိုးရှိသော အရာများကိုကိုင်တွယ်မိသော လက်တွင်လည်း ရောဂါပိုးများရှိနေနိုင်သောကြောင့် လက်ကို ဆပ်ပြာဖြင့်မကြာခဏ ဆေးသင့်ပြီး ရောဂါပိုးရှိနေနိုင်သောလက်နှင့် မျက်စိ၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်တို့ကို မကိုင်တွယ်မိစေရန် သတိထားသင့်သည်။ ဝက်သားစားခြင်းဖြင့် ရောဂါကူးစက်ခြင်းမရှိနိုင်ပါ။ မချက်ပြုတ်ရသေးသော ဝက်သားကိုကိုင်တွယ်ခြင်းဖြင့်လဲ ကူးစက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဝက်၏ အဆုတ်ထဲ၌ပင် ရောဂါပိုးကိုတွေ့ရှိရခြင်းမရှိဟုသိရှိရပါသည်။ ဝက်မှ လူသို့ ကူးစက်ရန် မှာ ရောဂါရှိသော ဝက်တစ်ကောင်သင့်ရှေ့တွင် နှာချေလိုက်သော အခါတွင်မှဟု တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့သော် မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကျွန်တော်ဖတ်ရှူလေ့လာမှတ်သားထားသည်များမှာ ကိုယ်တွေ့မဟုတ်သည့်အပြင် ဒွိဟဖြစ်စရာများ ကိုလည်းတွေ့ရှိရသောကြောင့် ယခုအချိန်တွင် မချက်ပြုတ်ရသေးသော ဝက်သားကိုသတိဖြင့်ကိုင်တွယ် (လက်အိတ်ဖြင့့််) ကိုင်တွယ်သင့်ပြီး ကျက်အောင် (၇၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် သို့ ၁၆၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) ချက်ပြုတ်ပြီးမှစားသုံးသင့်သည်။
၄. ရောဂါ လက္ခဏာများ
ယခုဖြစ်ပွါးနေသော တုပ်ကွေးရောဂါ၏ လက္ခဏာများမှာ ယခင်ဖြစ်ပွါးနေကြ တုပ်ကွေးရောဂါများ၏ လက္ခဏာများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ ရောဂါကူးစက်ခြင်းခံရသူသည် ကိုယ်အပူချိန်တက်ခြင်း(ဖျားခြင်း)၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ နုံးချိနေခြင်း၊ ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကို ခံစားရနိုင်ပါသည်။ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်းတို့ကိုလည်း တခါတရံခံစားရနိုင်ပါသည်။ တုပ်ကွေးပိုးသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှ တဆင့် လူခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ရောက်ပြီးနောက် အဆုတ်ကို ရောက်ရှိပြီး နမိုးနီးယားအထိဖြစ်ပွါးစေနိုင်သောကြောင့် ရောဂါဖြစ်ပွါးသည် ဟုသံသယရှိပါက မပေါ့ဆရန်လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် နာတာရှည်ရောဂါရှိသူများ (ဥပမာ- ပန်းနာရင်ကျပ်၊ အဆုတ်ရောဂါ၊ ဆီးချို၊ နှလုံး၊ ကျောက်ကပ်) ရှိသူများသည် သာမန်လူများထက် ကိုယ်ခံအားလျော့နည်းနိုင်သောကြောင့် ပို၍သတိရှိသင့်သည်။ ရောဂါကူးစက်ခြင်းခံရသူသည် ရောဂါလက္ခဏာမပြမီ ၁ရက် နှင့် ရောဂါလက္ခဏာပြပြီး ၇ရက်အတွင်း အခြားသူများကိုရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့စေပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာများ အားလုံးကင်းစင်သွားပြီးနောက် အနည်းဆုံး ၂၄နာရီ (သို့မဟုတ်) ထို့ထက်ပိုသောကာလအတွင်းမှာလဲ အခြားသူများကိုကူးစက်စေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ရောဂါ လက္ခဏာများမရှိလျှင်တောင်မှ ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်သည်ဆိုသည်ကို သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ ကလေးများတွင် ထို့ထက်ပိုသောကာလ (ဥပမာ- ၁၀ရက်). ရောဂါကူးစက်ခြင်းခံရသူသည် ကူးစက်ခံရပြီး ၁ ရက်မှ ၄ ရက်အတွင်း ရောဂါလက္ခဏာပြပါတယ်။
၅. ရောဂါ ကူးစက်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း
ရောဂါကူးစက်သော လမ်းကြောင်းမှာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဖြစ်သောကြောင့် အဓိကအားဖြင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကာကွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ နှာခေါင်းစည်း (mask) ကိုလူစုလူဝေးရှိသောနေရာများသို့ သွားသောအခါ တပ်သင့်သည်။ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးဖြစ်နေသောသူများမှာ မိမိ၏နေအိမ်တွင်သာနေထိုင်သင့်သည်။ mask တပ်ရာတွင်လည်း လုံခြုံအောင်တပ်သင့်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် N95 mask ကို အသုံးပြုသင့်သည်။ N95 maskဆိုသည်မှာ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရှိနေရသော တစ်ခါသုံး mask များမဟုတ်ပါ။ ယခုရောင်းချနေသော mask များမှာ ခွဲစိတ်ခန်းများတွင် ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများထံမှ ရောဂါပိုးများလူနာဆီသို့ မရောက်ရှိအောင် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အတွင်းမှရောဂါပိုးများ အပြင်သို့မရောက်ရန်အဓိကကာကွယ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ nN95 mask မှာမူ ပြင်ပလေထုထဲတွင်ရှိသော ရောဂါပိုးများကို အလွန်သေးငယ်သောအမှုန်အမွှားအထိစစ်ချပေးနိုင်ခြင်း၊ တပ်ရာတွင် မျက်နာနှင့် အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းတို့ကြောင့် ယခု တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ဆားရောဂါ တို့မှ ကာကွယ်ရန် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ သို့သော် N95 mask ၁ခု ဈေးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ မှ ၄ အတွင်း ရှိနိုင်သောကြောင့် အလွယ်တကူအသုံးပြုရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် သာမန် mask များကိုပင် သတိဖြင့်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ရောဂါကို လုံးဝကာကွယ်မပေးနိုင်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အတိုင်းအတာ ၁ခုအထိကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အကာအကွယ်ယူထားသည် ဟုယူဆပြီး သတိလက်လွှတ်မဖြစ်စေလိုသောကြောင့် သတိပေးရခြင်းဖြစ်သည်။ mask များ စိုလာလျှင်လည်း အသစ်တစ်ခုလဲပေးသင့်ပါသည်။ အသုံးပြုပြီးသား ကိုသိမ်းစည်းပြီး ပြန်လည်အသုံးမပြုသင့်ပေ။ ပြန်လည်အသုံးပြု၍ ရသော mask များကိုလည်း ရေနွေးဖြင့်ပြုတ်ပြီး (သို့) ပိုးသတ်ဆေးဖြင့် (bleaching powder ဟင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်း နှင့် ရေ ၁လီတာ ရော၊ မိနစ် ၃၀ စိမ်ရမည်) ပိုးသတ်ပြီးမှသာ ပြန်လည်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ လက်များတွင်လည်း ရောဂါပိုးများ ကပ်နေနိုင်သောကြောင့် မကြာခဏ ဆပ်ပြာ နှင့် ရေ (သို့) အရက်ပြန် နှင့် ဆေးပေးသင့်သည်။ ဆေးကြောထားခြင်းမရှိသော လက်နှင့် မျက်စိ၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်တို့ကိုမကိုင်တွယ်သင့်ပေ။ တုပ်ကွေးရောဂါပိုးသည် ရောဂါရှိသူ၏ ကိုယ်တွင်းမှ ထွက်ပြီး ပြင်ပတွင် ၂ နာရီကြာအသက်ရှင်နိုင်သည် ကိုလည်းသတိချပ်သင့်သည်။
ရောဂါပိုးကို လူနာ၏ သလိပ်၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းတို့မှ ထုတ်ယူစစ်စေးနိုင်ပါတယ်။ တုပ်ကွေးရောဂါပိုး type A ဟုတ်မဟုတ်ကို အမြန်စစ်ဆေးနိုင်သော်လည်း ဝက်တုပ်ကွေး (H1N1) ဟုတ်မဟုတ်ကိုသိရှိရန်ကိုမူ ပိုမို အသေးစိတ်ကျသော စစ်ဆေးနည်းများနှင့်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
၇. ရောဂါ ကုသရန်ဆေးများ
၂၀၀၉ လူတုပ်ကွေးရောဂါသည် အခြားသာမန်တုပ်ကွေးများတွင် အသုံးပြုသောဆေး၂မျိုးဖြင့် ကုသနိုင်သည်ဟုသိရှိရသည်။ ထိုဆေးများမှာ oseltamivir (Tamiflu) နှင့် zanamivir (Relenza) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Tamiflu ကတော့ သောက်ဆေးဖြစ်ပြီး Relenza ကတော့ ရှူဆေးဖြစ်တယ်။ ထိုဆေးများကို ရောဂါဖြစ်ပွါးပြီး ၂၄နာရီအတွင်းသောက်သုံးက ပိုမိုထိရောက်သည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ သို့သော် ထိုဆေးများမှာ ဆရာဝန်၏ ညွန်ကြားချက်ဖြင့်သာ သောက်သုံးသင့်သောဆေးများဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် မိမိ မသောက်ပါနှင့်။ ရောဂါကူးစက်ခံရသည် ဟုသံသယရှိလျှင် နီးစပ်ရာ တတ်ကျွမ်းသောဆရာဝန်များ နှင့်အမြန်ဆုံး ပြသသင့်ပါသည်။ ပြသချိန်နောက်ကျပါက သင့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးလေးကို စေတနာဖြင့်ရေးသားပေးသော ကိုတော်တီ (Mutdfan) ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကူးယူခွင့်ပြုတဲ့အတွက် Mutdfan Admin များအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
Posted by တောင်ပေါ်သား at 10:23 AM | Labels: မျှဝေခြင်း
ဟိုကျော်ဒီကျော် ကမန်းကတမ်းဖတ်သွားတယ် ..
nN95 mask သုံးရမယ်မှန်း သိဘူး... တခါသုံးတွေပဲ အိမ်က ကြိုမှာထားတာ.. တပ်လည်းမ တပ်ပါဘူး... ဒီတိုင်းသိမ်းထားတာ...(ခုတော့ ရန်ကုန်ကို ပြန်ပို့ရမလိုဖြစ်နေပြီ)
ဒီပိုစ့်လေး အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ မသိသေးတာတွေကို လဲသိသွားပြီး...သတိထားရတာပေ့ါ..။ အမ်အာတီတွေထဲမှာ တစ်ချို့ mask တွေတပ်တာတော့ တွေ့တယ်...။ ကိုယ်တိုင်တော့ မတပ်ချင်သေးဘူး...း)
အင်း..မနက်မနက်.. ရုံးသွားရာလမ်းမှာ မျက်နှာဖုံးကြီးနဲ့ ဟင့်..တယောက်ထဲ ဟိုက ကွက်ကြည့် ဒီကကွက်ကြည့်..း(.. ဒီမှာ ဘာလို့ ဘယ်သူမှ မတပ်ကြတာတုန်း....
ဝက် / လူ တုပ်ကွေး အကြောင်း အတော်လေး စုံလင်အောင် ဖေါ်ပြပေးထားတာ ဗဟုသုတ များစွာ ရစေနိုင်တဲ့ဆောင်းပါး လေးပါ ။
ရှောင်ရန် ။ ဆောင်ရန် တွေ လိုက်နာ ကြဖို့လိုတယ်ပေါ့ ။
ဒါဆို ကြောက်စရာ မလို လှပါဘူး ။
ကိုယ်တိုင်လည်း သတိထား နေအုံး ။
ဟို အနောက်မှာ ဝက်မလေး တကောင် နှာချေ နေတယ် ..
ဟတ်ချိုး .. ဆိတ် ဖွား တောင်ပေါ်သား တဲ့ အေ...
ပေါ်ပေါ် က ရှိနေတော့
တူတော်မောင်ရေ..ကောင်းတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ ကြီးဒေါ်သေချာမှတ်သားသွားတယ်။ ကြောက်တယ်ဟ။
သေချာဖတ်သွားတယ် တောင်ပေါ်သားရေ.. ကျေးဇူးပဲ.. :)
Good site i know one site that good on movies.Get free all new movies free download .Another great place to watch movies for free is http://10starmovies.com.you can also go to watch free movies it isagreat search engine to find free streaming movies shows animations series cartoons and many more documentary